Nagarik Shukrabar - ‘ब्राण्डिङ सुनको सुगन्ध हो’
Log In Logout subscribe
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०५ : ३१
My Republica Nagarik Nagarik Network
‘ब्राण्डिङ सुनको सुगन्ध हो’
शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६, ०६ : ३७ | शुक्रवार
पत्रकारिता हुँदै व्यापारिक घरानामा आफ्नो करिअर बनाइरहेकी पोखराकी विमला थापा एमभी दुगड ग्रुपकी पीआर हेड हुन् । थापा अहिले दुगड ग्रुपअन्तर्गत ब्राण्डिङ, मार्केटिङ, इभेन्ट मेनेजमेन्ट, मिडिया क्षेत्रको जिम्मवारी सम्हालिरहेकी छिन् । मिडियाबाट व्यावसायिक घरानामा आएकी थापासँग शुक्रवारका लागि गरिएको कुराकानी :
स्कुलले जीवनमा के बन्ने लक्ष्य थियो ?
वकालत वा उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा थियो । एअर होस्टेज बन्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि थियो । तालिम पनि लिएँ । एक वर्षमा यती एयरलाइन्समा अवसर पाएँ । उडानको क्षेत्रमा परिवारले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसपछि यो क्षेत्रमा आएको हुँ ।
कसरी व्यावसायिक ग्रुपमा आउनु भयो ?
पत्रकारिताको विद्यार्थी भएकाले मेरो क्षेत्र सञ्चार हो । अहिले पनि एमभी दुगड़ ग्रुपमा मिडिया नै हेरिरहेकी छु । एक दशकको मिडिया अनुभवकै कारण यो अवसर पाएँ । पोखरामा फ्रिलान्सरको रुपमा कार्यक्रम चलाउँथे । ठूला इभेन्टमा मलाई नै आमन्त्रण गर्थे । एमसीमा कमाएको सफलताले यो स्थानमा आउने अवसर मिल्यो । एमभी दुगड गु्रपका उपाध्यक्ष विवेक दुगडको प्रेरणाले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । जुनसुकै काम गरे पनि व्यावसायिक रुपमा काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयमा राम्रो काम गरे अवसर पाउने सम्भावना हुन्छ ।
कर्पोरेट क्षेत्रको करिअरलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कर्पोरेट क्षेत्र कठिन विश्वविद्यालय हो, यसमा कडा अनुशासन हुन्छ । निर्धारित समयतालिकामा बसेर काम गर्नुपर्छ । यो मेरो जीवनको दोस्रो इनिङ हो । कर्पोरेट क्षेत्र मेरा लागि कोशेढुंगा सावित भएको छ ।
एमभी दुगड़ गु्रपले के–के सेवा दिँदै आएको छ ?
दुगड ग्रुपको एक सय ३७ वर्ष पुरानो इतिहास छ । बैंक, इन्स्योरेन्स, हाईड्रोपावर र अटोमोबाइल्समा संलग्नता छ । हाम्रो ग्रुपको अहिले सनराइज बंैक, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा बैंकमा मुख्य सेयर छ । अहिले हाइड्रोपावर र अटो मोबाइल्समा केन्द्रित छौं । ४७ वर्षदेखि अटो क्षेत्रमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ । हाइड्रोपावरमा आक्रामक लगानी भैरहेको छ । २९ मेगावाटको लिखु ए, ७७ मेगावाटको लिखु एक र ५१ मेगावाटको लिखु दुई गरी जम्मा एक ५७ मेगावाट विद्युतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । अटोमा हामीसँग रोयल इन्फिल्ड, महिन्द्राका कमर्सियल गाडीहरु, महेन्द्रका कन्स्ट्रक्सन गाडी, कन्स्ट्रक्सन इक्युपमेन्टमा रिटगन र एमकेजी, ट्याक्टरमा जोनडियर ट्याक्टर, तीन पाङ्ग्रामा हामीसँग पियाजियो छ भने पछिल्लो समयमा युवा माझमा चर्चित प्रिमियम ब्राण्ड भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटर दुगड ग्रुपले बिक्री गर्दै आएको छ ।
यहाँ आबद्ध गु्रपले बिक्री गर्दै आएका सामग्री किन प्रयोग गर्ने ?
यहाँको प्रश्नले मलाई मेरो बोस विवेक दुगडले भन्नु भएको एउटा वाक्य स्मरण भयो । ‘हामी सपना बेच्दैनाैँ’, यो वाक्यले सधैं घच्घचाइरहन्छ । झुटको व्यापार÷कारोबार कहिल्यै गर्नु हुँदैन । आफ्ना प्रोडक्ट बेच्न झुटो विज्ञापन कहिल्यै गर्दैनौं । मुलुकभर सेवा र सुविधायुक्त शाखा विस्तार गरेका छौं । हामीले बिक्री गर्ने सबै सेवा गुणस्तरीय र टिकाउ छन् । ब्रान्डेड कम्पनीका उत्पादन बिक्री गरिरहेका छन् । जुनमा प्रयोगकर्ताको कुनै कम्प्लेन छैन । हाम्रो सेवाप्रति सबै सन्तुष्ट छन् ।
व्यवसायमा ब्रान्डिङको के महत्व छ ?
ब्रान्डिङ भनेको कुनै पनि वस्तुको पहिचान अनि अस्तित्व हो । हामीलाई लाग्दैन कि रोयल इन्फिल्ड, महिन्द्रा, पिआजियो, भेस्पा÷अप्रिलिया जति पनि प्रोडक्टहरु छन्, त्यसलाई चिनाइ राख्नुपर्छ । ब्रान्डिङले त्यसको महत्व बुझाउँछ । ब्राण्डिङले सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ ।
व्यावसायिक वातावरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउनु पर्छ पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ । अवसर दिए विकासका लागि टेवा पु¥याउन सक्छन् । सरकारले वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । बजारमा महँगी बढेको छ । एक जनाको कमाइले परिवार धान्न कठिन छ । व्यापार गर्न कठिन छ ।
यहाँको रुचि ?
ट्राभलिङ गर्न असाध्यै मनपर्छ । नयाँ ठाउँ घुम्नु, त्यहाँको लाइफ स्टाइललाई तस्बिरमा कैद गर्न, तस्बिरबाट कथा लेख्न मनपर्छ । ती कथालाई सोसल मिडियामा राख्ने गर्छु । रेडियोमा बोल्ने मेरो प्यासन हो । अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।
सफलताका लागि के आवश्यक छ ?
हातको रेखामा भाग्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने याद राख्नुस् । भाग्य तीनको पनि हुन्छ, जसको हात नै हुँदैन । सफलताको कुनै फर्मूला हुँदैन । मिहिनेतले सफलता मिल्छ । अहिलेका युवा धेरै अत्तालिएको देखिन्छ । जे कुराको पनि रिजल्ट तत्काल खोज्ने चलन छ । रुख रोप्नासाथ तुरुन्त फलको आस गरेर हुन्छ त ? धैर्यता लिनुपर्छ ।
सरकारले जोगायो ५१३ मेनपावर
अन्य पेसाका लागि संख्याको मापदण्ड नतोकिने तर मेनपावरले मात्र वर्ष सय जनालाई विदेश पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको व्यवसायीहरू बताउँदै आएका छन्।
बाल्ट्राको अटोमेटिक स्यानिटाइज डिस्पेन्सर
बाल्ट्राले अटोमेटिक ह्यान्ड स्यानिटाइज डिस्पेन्सर बजारमा ल्याएको छ।
प्रभुु र समृद्धि क्यापिटलको एकीकृत कारोबार
प्रभु क्यापिटल र समृद्धि क्यापिटल मर्ज भएर सोमबारदेखि प्रभु क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबारको सुरु भएको छ।
पूर्वमिस नेपाल अर्थ सिग्देल बनिन् साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य
गत वर्षकी मिस नेपाल अर्थ २४ वर्षीय प्रिया सिग्देललाई साझा पार्टीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। देश भित्र र बाहिरबाट पार्टीको नेतृत्वमा युवाहरूलाई जोड्न लागि परेको साझा पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सिग्देललाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
पाँच वर्षमुनिको बच्चाको हक आमामा
सकेसम्म आफ्ना झगडाको कारण पत्ता लगाएर दुवै आमा बुवाले आ–आफ्ना गल्ती सुधारेर मिलेर बस्दा राम्रो हुन्छ।
घरमा बस्नै मन लाग्दैन
मेरो ड्याडीले आत्महत्याको प्रयास गर्नु भयो। कारण उहाँलाई परेको मानसिक तनाव नै हो। यसपछि मैले कलेज छाडेँ। यहाँ बस्न मन लागेन र युएसका लागि तयारी गरिरहेकी थिएँ तर भिसा रिजेक्ट भयो।
Copyright 2021 Nepal Republic Media Pvt. Ltd. | All rights reserved.